Ny fitaovana marketing lehibe indrindra hatramin'izay! | Martech Zone
Fihaonana an-tampon'ny Media sosialy | Fihaonambe an-tserasera maimaim-poana | 23 Jona 2021
Ny fitaovana marketing lehibe indrindra hatramin'izay!
Alarobia, Novambra 11, 2009 Talata, Novambra 10, 2009 Adam Small
Tsia, tsy hamoaka teknolojia vaovao sy mahafinaritra vaovao aho, tranokala, na bala volafotsy varotra hafa izay hanakorontana ny orinasanao ho lasa kintana lehibe.
Miresaka aho serivisy mpanjifa lehibe. Toa miharihary ny milaza izany. Fantatry ny rehetra fa ny serivisy ho an'ny mpanjifa lehibe dia fomba voaporofo hampitomboana ny orinasanao, saingy amin'ny zavatra hitako dia orinasa maro no nanadino izany. Raha tsy hadinon'izy ireo izany, farafaharatsiny farafaharatsiny tsy azony atao ny mamela ny feon'ireo mpanjifany faly hampitombo ny orinasany.
Samy manana ny tantarany mampihoron-koditra ny tsirairay momba ny serivisy ho an'ny mpanjifa ary samy manana ny tantarany momba ny serivisy ho an'ny mpanjifa ny tsirairay. Amin'ny maha mpivarotra antsika dia mila tadidintsika fa ireo tantara ireo dia lazaina isan'andro amin'ny mpanjifa sy mpanjifa ho avy. Ary ankehitriny - ny media sosialy dia nanamafy ireo resaka ireo!
Ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia manana fahefana hanapaka ny fomba roa. Io tantara ratsy io dia manana fahefana handefasana vina sy mpanjifa vaovao ho an'ireo mpifaninana aminao. Ity tantara mahafinaritra ity dia mety hitondra mpanjifa vaovao sy fampitomboana ny varotra. Anjaranao ny manatsara ny serivisy ho an'ny mpanjifa hanginana ny ratsy, ary manome omby omby hampitombo ny tsara!
Ka ahoana no ahazoantsika antoka fa voalaza ny tantara? Tato ho ato dia nahita fomba tsy lafo sy azo ampiharina aho mba hahazoana antoka fa voatantara ny tantara. Orinasa iray fantatro fa mamela ny mpanjifa hanoratra sy hamoaka ny tantarany ao amin'ny bilaogin'ilay orinasa ary mizara azy ireo amin'izay maniry hamaky.
Ny orinasa sasany dia nanomboka tambajotra mpanjifa ao amin'ny Ning sehatra. Ampiasain'izy ireo ho tambajotra fahalalana, forum, birao fanampiana ary tranonkala fijoroana vavolombelona ireo tambajotra ireo. Izy io dia fomba iray lehibe hanangonana ny traikefan'ny mpanjifa ary handoko ny tena tantara momba ny serivisy mpanjifa lehibe an'ny orinasanao.
Ka inona no ataonao mba hahazoana antoka fa handre momba ny serivisinao mpanjifa lehibe ny vinavinanao?
Tags: laura lippayWordPress
Adam Small Wednesday, November 11, 2009 Tuesday, November 10, 2009
Adam Small no CEO an'ny AgentSauce, sehatra marketing an-tserasera feno sy feno, feno miaraka amin'ny mailaka, mailaka, SMS, fampiharana finday, media sosialy, CRM, ary MLS.
Fitaovana fanatanjahantena an'i Dick mitondra fiara amin'ny media sosialy amin'ny mailaka
Dingana 5 amin'ny tambajotra sosialy ho an'ny matihanina amin'ny varotra
11 Nov 2009 tamin'ny 2:15 PM
Misaotra, misaotra, misaotra. Mino aho fa ny elefanta ao amin'ny efitrano misy fifanakalozan-kevitra momba ny haitao dia tsy tokony hadinoina momba ireo olona tianao hampiasa ny teknolojia misy anao. Raha manadino ny momba ny olona ianao dia tsy afaka manao tombony na mahasoa ny eritreritrao rehetra.
14 Nov 2009 tamin'ny 7:40 PM
Julie, Misaotra! Manaiky aho fa tsara ihany ny teknolojia raha oharina amin'ilay olona mampiasa azy.
11 Nov 2009 tamin'ny 7:01 PM
Tsy azo lazaina izany. Ary na izany aza ny orinasa * dia * toa tsy nahazo. Ity dia zavatra iray hanombohantsika hiresaka bebe kokoa amin'ny bilaoginay, ary hitrandraka lalina kokoa ny fomba ahafahan'ny orinasa mandeha amin'ny marketing media sosialy ka hatrany amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa media sosialy, saingy mbola mieritreritra aho fa ny dingana voalohany dia ny fampatsiahivana ireo orinasa izany serivisy ho an'ny mpanjifa izany no fitaovana marketing tsara indrindra any.
12 Nov 2009 tamin'ny 2:07 PM
Voamariko fa ireo orinasa tena miahy ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia nanomboka nampiasa media sosialy tamin'ny fomba mahomby. Manomboka amin'ny lisitry ny tranokala famerenana ka hatramin'ny famaliana ireo fanontaniana mety hananan'ny mpanjifa, ary hatramin'ny fanekena ampahibemaso ny fitarainan'ny vokatra sy ny vahaolana. Ekena fa mbola lavitra ny lalana alohan'ny hanaparitahana azy.
12 Nov 2009 tamin'ny 11:00 PM
Hoy i Adama. Ny kodiarana dia tsy havaozina, fa nohamboarina fotsiny mba hahamora ny fivezivezena. -Paul
14 Nov 2009 tamin'ny 7:38 PM
15 Nov 2009 amin'ny 3:04 maraina
Ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia iray amin'ireo zavatra izay ankamamiana foana ary sarobidy kokoa. Saingy tiako ny mahita azy ireo misidina kely. Ny fananana laza tsara amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia manome làlana malalaka ny orinasa rehefa solafaka izy ireo. Saingy nahazo izany latitude izany izy ireo.
Toa tsy miraharaha ny serivisy ho an'ny mpanjifa ny orinasa sasany satria tsy voafehiny mivantana. Na izany aza dia marina ny filazanao fa io no fitaovana marketing lehibe indrindra hatramin'izay, indrindra rehefa tafiditra ao am-bava vava fatratra ianao.
18 Jan 2010 amin'ny 6:46 PM
Na dia toa tokony ho miharihary aza fa tokony hanana serivisy ho an'ny mpanjifa tsara ianao, toa tsy izany, raha jerena ny isan'ny orinasa tena manana serivisy tsara.
Tom - Eye Associates